घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू पोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरू राफेल लीयो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो राफेल लिओको जीवनीले तपाईंलाई उसको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेपमा हामी तपाईंलाई पुर्तगाली फुटबलर अल्माडा मूलको इतिहास दिन्छौं। यो आफ्नो शुरुआती दिनदेखि शुरू हुन्छ, जब उनी प्रसिद्ध भए एसी मिलान। तपाईंलाई राफेल लिओको बायोको आकर्षक प्रकृतिको मीठो स्वाद दिनको लागि, यहाँ उहाँको जीवनको चित्रण सारांश छ।
बाल्यकालदेखि एडल्टहुडसम्म, यो राफेल लिओको पूर्ण जीवनी हो।
हो, केहि फ्यानहरू सजग छन् अगाडि हो भनेर 'पुर्तगाली Mbappe।' यो किनभने त्यो छ फ्रेन्च स्टार संग तुलना आकर्षित किलियन एमपीपी उसको अद्भुत शैलीको खेलको लागि।
प्रशंसाको बावजुद, हामी बुझ्छौं कि केवल केहि व्यक्तिहरूले राफेल लिओको संक्षिप्त जीवन कहानी प्रयोग गरेका छन्। LifeBogger यो तयार गरेको छ, प्रेम को प्रेम को लागी। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
राफेल लिवो बाल्यकाल कहानी:
जीवनी सुरुवातीहरूको लागि, उहाँ उपनाम बोक्नुहुन्छ रफब्लिks्कहरू। राफेलको जन्म जून १ 10 1999। को जून १० मा उनको आमा बुबा श्रीमती र श्रीमती कोन्सेइओ लिओको पोर्तुगलको अल्माडा शहरमा भएको थियो।
उनको जन्म पछि, उसलाई एउटा नाम दिइयो जुन यसको मतलब सिंह-हृदय हो। फुटबलर छ जना बच्चाहरू मध्ये एक हो (चार भाई र जुम्ल्याहा बहिनीहरू) उनको आमा र बुबाको बीच मिलनबाट जन्मेका हुन् जसलाई यहाँ चित्रण गरिएको छ।
राफेल लिओका आमा-बुबालाई भेट्नुहोस् - उहाँ जस्तो देखिने बुबा र एक नरम हृदय।
अल्माडा मूल निवासीले आफ्नो बाल्यकालका वर्षहरू धेरै भाई-बहिनीहरूसँग बिताए जो आफ्नो विगतको लागि उत्तम लिंक रहन्छन्। उनका बहिनीहरूबाट सुरु पालो र बियन्का लिओ (जुम्ल्याहा) हुन्। अर्को महिला राफेलको भाई नादिया लिओ हुन् जो आफ्नो बायो लेख्ने समयमा १० भन्दा कम थिइन्। यस अगाडि आफ्नो बचपन Almada शहर मा बिताए। यो लिग्बनको विपरीत ट्यागसको किनारमा छ।
एसी मिलान आफ्ना भाइहरूसँगै अगाडि गाह्रो बाल्यकालमा बाँचिरहेको थियो, जसले उनीहरूलाई धेरै त्यागहरू गरेको देखे। उनका सबै भाई-बहिनीहरूमध्ये, राफेल फरक थिए किनकि उनका आमा-बुबाले उनलाई एक पितृसत्तात्मक नाम दिएका थिए। के तपाईंलाई थाहा छ लियोको अर्थ “सिंह” हो? फुटबलर शक्ति र प्रभुत्वको जीवन बिताउने भाग्य थियो।
राफेल लीयो परिवार पृष्ठभूमि:
यद्यपि अगाडि का आमा बुबा आप्रवासी थिए, तिनीहरू गरीब मैला बाट टाढा थिए तर धनी थिएनन्। तैपनि, लिओको एक मिडिल-क्लास पालन-पोषण छ र ऊ एकदम नम्र पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट छ। एक करोडपति फुटबलरको रूपमा पनि, उसका माता-पिता अझै पनि लिस्बनका औसत मानिसहरू जस्तै काम गर्न जान्छन्। राफेल लिओको आमा एक कपाल हो, जबकि उनको बुवा, एक सरकारी कर्मचारी।
आफ्नो खराब पृष्ठभूमिको इतिहास पत्ता लगाउँदै, शार्पशुटरले एकपटक प्रशंसकहरूलाई उक्त भवनको झलक देखायो जहाँ उनी पोर्तुगालमा हुर्किए। एसी मिलान तारा यो परिवारको अभाव यो फोटो संग। यो सम्पत्ति ठीक गर्न उसले आफ्नो फुटबल पैसा प्रयोग गर्ने पनि कसम खायो।
क्याप्शनमा लेखिएको छ - "म यहाँ सिंह जस्तै बन्न माउसको रूपमा हुर्कें।"
राफेल लिओ परिवार मूल:
हो, हामीलाई थाहा छ उनी पोर्चुगलका हुन्। सत्य यो हो कि सोकर ताराको अफ्रिकी मूल हो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, राफेल लिओका आमा बुबा अफ्रिकाबाट, विभिन्न देशहरूका साथ छन्। उनका बुबा अंगोलाका हुन् जबकि उनकी आमा साओ-टोमे-एट-प्रिन्सिपेकी हुन्। दुबै पोर्चुगल मा आप्रवासी को रूप मा भेटे र एक परिवार गठन गर्ने निर्णय गरे।
हामीले उसको बुबा र आमा कहाँबाट आयो भनेर पत्ता लगाउन अनुसन्धान गर्‍यौं।
राफेल लिओ अनटोल्ड फुटबल कहानी:
अल्माडाको शहरमा हुर्किएपछि उनी सानै उमेरदेखि नै फुटबलमा संलग्न भए। वास्तवमा, लिओको पैतृक सहरको मैदान र नदी ब्या .्कले उनको बाल्यकालको फुटबलको सम्झनाहरू राख्दछ। ऊ के इतिहास सम्झन्छ सम्झना गर्दै, एसी मिलान अगाडि भन्यो;
जब म सानो थिए म हरेक दिन बल खेल्थें। कहिलेकाँही म आमा बुबाबाट खाजा वा खाजा पनि लिन जान्दिन।
म फोहोर सर्टकटको साथ खाजा खाने समयमा मात्र घरमा आएँ। वास्तवमा, मेरो बुबाले खरीद गरेको नयाँ स्नीकर्स पहिले नै प्रयोग भइरहेको थियो।
जस्तै क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राफेल लिओ जब उनी खेल हराउँदछन् रोए। तपाईका साथीहरूले उसलाई कहिले पनि बोलाएनन् रो बच्चा। ऊ वास्तवमै भावनात्मक बच्चा थियो, जो एक खेल हराउने बारे चिन्तित थियो।
शिक्षा तथ्यहरू - कसरी राफेल लिओले स्कूली शिक्षा देखे:
सुरुमा, फुटबलरका अभिभावकले उसलाई मुख्य रूपमा शिक्षाविद्हरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न भने। राफेलले उनीहरूलाई भने कि उनीहरु दुबै मेलमिलापमा राम्रो थिए। त्यसबेला, फुटबलमा खेलहरू जितेर र पुस्तकहरू पढ्नको लागि मात्र खुशी थियो। लिओ आधारभूत विद्यालय गयो तर रोक्नु प so्यो ताकि उसले सपना पछ्याउन सक। एक साक्षात्कार को समयमा उनको शब्दहरु मा;
म शिक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दिन किनकि म सपनाको अनुसरण गर्दै थिएँ। केही कक्षाको बीचमा मैले प्रशिक्षणका लागि बाहिर जानु परेको थियो। मसँग धेरै भन्दा बढि स्कूली शिक्षा थिएन।
त्यतिखेर जब उनका दाजुभाइ दिदीबहिनी स्कूल जान्छन्, राफेल आफ्नो परिवारको घरमा नै रहन्छन् ताकि उनी प्रशिक्षणको लागि तयारी गर्न सक्थे। आइतवारको बखत ऊ आराम गर्ने थियो - शारीरिक रूपमा राम्रो हप्ताको लागि जो धेरै छिटो जान्छ।
कसरी फुटबल शुरू भयो भन्ने कहानी:
राफेल साथीहरूको साथ आफ्नो भवनको तलको खेल खेल्न शुरू भयो। भाग्यवस, यो पता लाग्छ कि अमोरा फुटबल क्लबको अध्यक्षको निवास आफ्नो परिवारको घरको वरिपरि थियो।
एक दिन, करीव or वा years बर्षको उमेर, उनले मलाई मेरो झ्यालबाट मेरा साथीहरू ड्रबिंग गरेको देखेर मसँग कुरा गरे। AMORA BOSS मलाई भन्यो कि म उसको क्लबमा सामेल हुन सक्छु।
धेरै खुशी संग, म त्यहाँ गए - उनको आमन्त्रित सम्मान।
मेरो पहिलो खेलमा, मैले फेला पारे कि सडक फुटबल ACADEMY फुटबल भन्दा धेरै फरक थियो।
अमोरा टूर्नामेन्ट र बेनफीका हार:
राफेल लिओ अमोरा एफसीमा तीन हप्ता मात्र रह्यो। आफ्नो पहिलो दुई भित्र, ऊ ठूलो प्रतियोगिताको लागि छनौट भयो। प्रशंसकहरूलाई प्रभावित गरिसकेपछि, राफेल बेनिफिकाले छनौट गरे जसले उसलाई फूट २१ मा पठाए जुन संरचना आज अस्तित्वमै बन्द छ।
राफेल लिओका आमाबुवा र बेन्फीका राजी भए उनी उनीसँगै सिजनको अन्तमा सामेल हुनेछन्। दुःखको कुरा, तपाईं एक समस्या आयो। उनका बुबा र आमाले छोरालाई निरन्तर यातायातको लागि खर्च गर्न सक्नुहुन्न। यसले राफेललाई अप्ट आउट गर्नको लागि बनायो र स्पोर्टि Sport सीपीको प्रख्यात युवा एकेडेमीमा सामेल भयो - जसले अधिक अनुकूल आधार प्रदान गर्दछ।
ग्रीन र गोराको साथ प्रारम्भिक एकेडेमी जीवन:
त्यसबेलाको फुटबॉल उन्माद स्पोर्टि Lis लिस्बन युवा प्रणालीमा हुर्कियो। लिओ १ 14 वर्षको हुँदा उनको प्रतिभालाई वेवास्ता गर्न गाह्रो भयो। केटाको युवा प्रशिक्षक र त्यस समयमा सल्लाहकार टियागो फर्नांडिसले फ्रान्स फुटबललाई भनेका थिए:
“मैले लिओ जस्तो बच्चाले बलको साथ काम गरेको कहिल्यै देखेको छैन। उहाँ यस्तो काम गर्नुहुन्छ जुन कसैले गर्न नसक्ने भयो। ”
त्यस पछि, टियागो फर्नांडिसले त्यसपछि लिओलाई ब्रान्ड गर्यो।खेलकुद एकेडेमीको इतिहासमा सबै भन्दा राम्रो खेलाडी" उनले एल'एक्इपलाई भने कि राफेल एक नेताको रूपमा (युवा कप्तान) भन्दा राम्रो प्रमाणित भएको थियो क्रिस्टियानो रोनाल्डो - उही उमेर मा। वास्तवमा, कडा दाबी अझै अवस्थित छ कि यो केटाले स्पोर्टि CP सीपी एकेडेमीको इतिहासमा सबै भन्दा राम्रो खेलाडीको रूपमा सम्मान राख्छ।
राफेल लिओ जीवनी - प्रख्यात कथाको लागि मार्ग:
वास्तवमा, लिपो प्रचारको लायक थियो। युवाले स्पोर्टि CP सीपी युथको माध्यमबाट प्रगति गरेको youth बर्षको उमेरमा १ aged बर्ष उमेरको पहिलो डेब्यू गर्नु भन्दा पहिले। त्यो खेलमा, उसले दोस्रो हाफमा पछाड्यो र ब्रेगाको बिरूद्ध जाल खडा गर्‍यो।
यसबाहेक, उनी १ books२ को हारमा पोर्तोको बिरूद्ध गोल गर्ने क्लबको कान्छो खेलाडीको रूपमा इतिहास किताबमा गए। हर्षका साथ, लिओले जाल भेटाए कि ठुलो जायफल मिलाएर Iker Casillas। वास्तवमा, लिओ पोर्चुगली लिग कपको उपाधि जितेको टोलीको हिस्सा थियो।
जति धेरै उनी भेर्डे ई ब्रान्कोससँग बस्न मन पराउँथे, उनीसँग छोड्नबाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन। उनको निकास असन्तुष्ट प्रशंसकहरु द्वारा क्लब को प्रशिक्षक र खिलाडीहरु मा एक आक्रमण संग जोडिएको थियो। उनको कथित विद्रोही बहिर्गमनको साथ, लिओ (उमेर १)) एक नि: शुल्क एजेन्ट बने र लिलीको लागि हस्ताक्षर गरे।
राफेल लिओ जीवनी - प्रख्यात कथा उठ्नुहोस्:
जब मिलान कलिंग गर्न आए, रातो र कालो युवा खेलाडीहरूलाई प्रमोट गर्ने प्रतिबद्धताको कारण अल्मडा मूल निवासी खुशीले स्वीकार गरे। यो मिलानको साथ थियो कि लिओ स्कोर गर्नका लागि प्रसिद्ध भयो सेरी ए इतिहासमा सब भन्दा छिटो गोल छ सेकेन्डमा। यो युरोपको शीर्ष पाँच लीगमा बनेको सबैभन्दा द्रुत गोल हो।
Ft फूट २ मा उभिएर, ठूलो स्ट्राइकरले देखाए कि तिनीसँग पहिले नै आधुनिक समयको अगाडि चाहिने मुख्य विशेषताहरू छन्। उनको आन्दोलनलाई त्योसँग तुलना गरिएको छ सर्जियो अगुरो, जबकि उनको बल उहाँलाई आदर्श बनाउँछ Romelu Lukaku.
एक शिकारी वृत्ति र लक्ष्य अगाडि तीक्ष्ण पञ्जाको साथ, जवान सिंहको लागि उत्तम दिनहरू पर्खिरहेका छन्। बाँकी, हामी भन्छौ कि इतिहास हो।
के राफेल लिओको प्रेमिका वा श्रीमती छ?
के तपाईं यहाँ प्रेममा फर्वार्डको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न यहाँ हुनुहुन्छ? के तपाईंलाई राफेल लिओको प्रेमिका को हो भन्ने पत्ता लगाउने तीव्र इच्छा छ? यसैले हामी र सबै ईमान्दारीमा, हामीले सबैतिर खोजी गर्यौं, अझै वागको कुनै चिह्न छैन।
राफेल लिओ प्रेमिका वा पत्नी हुन को हुनुहुन्छ?
गोप्य रूपमा डेटि? गर्न सकिन्छ? यदि हो भने, त्यसो भए उसको निजी जीवन सार्वजनिक हुनु अघि यो कुरा मात्र हो किनभने फुटबलले रहस्यलाई घृणा गर्दछ। तर हामी सोच्छौं कि लक्ष्यको सामने लीको जस्तै कसैको निजी मामिला प्रवन्धनमा कुनै समस्या पर्दैन।
यसको लागि, LifeBogger अन्ततः भन्छन् कि राफेल को एक गर्लफ्रेंड हुन सक्छ, हुनसक्छ कोही आफ्नो आमा बुबा द्वारा उनको भावी पत्नी र आफ्ना बच्चाहरुको आमा को रूपमा स्वीकृत छ। यस समयमा तपाईले सम्बन्धलाई निजी बनाउन चाहानुहुन्छ। यो हामीले प्राप्त गर्न सक्ने सबैभन्दा नजिकको थियो - एक आरोपित प्रेमिकाको।
राफेल पत्ता व्यक्तिगत जीवन:
स्पष्ट तस्वीर प्राप्त गर्न, हामी तपाईंलाई अंगोला र साओ-टोम-एट-प्रिन्सिपे परिवार जराबाट स्ट्राइकरको बारेमा बढी बताउनेछौं।
सबैभन्दा पहिले र राफेल लिओ सहमत गर्छन् उनी लजालु केटा हुन् र उनी पानीका शरीरहरु लाई राम्रो देखिन्छन। यस स्ट्राइकरले आफ्नो भित्री शक्ति पुनर्स्थापित गर्न आफ्नो खाली समयको उत्तम समय एक्लोमा र सबैमा सबै भन्दा टाढा खर्च गर्दछ।
एक पटक, आफ्नो उर्जा पुनर्स्थापना गर्दा - फुटबलबाट धेरै टाढा - उसले विगतको आफ्नो विगतमा प्रतिबिम्बित गरे र आफ्ना फ्यानहरूलाई भने;
यस जीवनमा तपाईले सबैलाई खुशी पार्न कहिले पनि सक्षम हुनुहुने छैन व्यक्ति तपाई जस्तोसुकै राम्रो व्यक्ति भए पनि।
तिनीहरूले तपाईंलाई हिट गर्ने प्रयास गर्न असंख्य चीजहरू भेट्टाउनेछन् र यही ठाउँमा तपाईं बलियो हुनुपर्दछ।
यस संसारमा पनि, सबैजना तपाइँले जितेको देख्न चाहँदैनन्। वास्तवमा, पृथ्वीको पृथ्वीमा सबै कुरा अद्भुत छैन।
राफेल लिओ लाइफस्टाइल:
शार्पशुटरले कसरी आफ्नो पैसा खर्च गर्छ भनेर छलफल गरौं। सुरु गर्नका लागि, उसको कुल मूल्य लगभग million मिलियन यूरो (२०२० तथ्या .्क) मा मूल्यवान छ। यद्यपि हामीलाई थाहा छैन कि लिओ एक विलासी जीवनशैली बिताइरहेको छ - यसका आकृति र कारहरूले सजिलै देख्न सक्ने छन्।
यस्तो जीवनशैली को प्रमाण मा मिलान मा उहाँ बस्ने लक्जरी घर / अपार्टमेंट शामेल छ। तिनीहरूको रखरखाव कानूनी रूपमा लिओको हुप पगले मासिक €,,, and39,473 मासिक र १.1.4 मिलियन डलर प्रतिवर्ष समर्थित छ। उनका केही विदेशी कारहरूको विदेशी कार्टहरू हेर्नुहोस्।
राफेल लीयो पारिवारिक जीवन:
यस अगाडि उनको परिवारलाई उनको सबैभन्दा ठूलो खजानाको रूपमा वर्णन गर्दछ जसले पानीको बखत उसको साथ लंगर गर्‍यो। यहाँ हामी तपाईलाई राफेल लिओका बाबुआमाको बारेमा तथ्यहरू ल्याउने छौं। हामी उसको भाइबहिनी र आफन्तहरूका बारे पनि विस्तृत जानकारी दिनेछौं।
राफेल लिओ फादरको बारेमा:
के तपाईंलाई थाहा छ किन उसले अ m्क लिन्छ जब उसले अ m्क स्कोर गर्छ? ... स्ट्राइकरले बुबाको लागि गर्छ जसले आफ्ना सबै खेलहरू हेरेर फोन गर्छ र पछि फोनमा यसको बारेमा कुरा गर्छ। फोन कल उत्सव आफ्नो बुबालाई बताउन मात्र एक तरिका हो कि;
हे बुबा, म स्कोर गर्न मात्र। यसको बारेमा पछि कुरा गरौं।
स्ट्राइकरको स्कोरिंग फाराम आफ्नो बुबालाई खुशी पार्ने इच्छाले ईन्धनको रूपमा लिन्छ। राफेल लिओको बुबा कोही हुनुहुन्छ जसको लागि उनी धेरै अर्थ राख्छन्। उनले उसलाई एक त्यस्तो व्यक्तिको रूपमा वर्णन गरे जुन मित्रैलो, चिसो, कडा र धेरै प्रत्यक्ष हुन सक्छ। उसको शब्दमा;
यदि ऊसँग मलाई केही भन्नु छ भने, ऊ सिधै भन्नेछ। मेरो बुबा कहिलेकाँही सुन्न गाह्रो छ, तर अन्तमा, उहाँ सँधै सही हुनुहुन्छ।
राफेल लिओको आमाको बारेमा:
फेब्रुअरी २०१ 2019 को आसपास, फुटबलरले त्यस महिलालाई आशिष्‌ दियो जसले उनको एउटा कपाल सैलुन दिए। आश्चर्य लिस्बन मा एक मुख्य व्यापार क्षेत्र Avenida Paiva Couceiro मा भयो। हेर, उनको आमाले आफ्नो छोरालाई पहिलो ग्राहक बनाएर सैलुन सुरुवात गर्दै - उनको सपना साकार भएकोमा धन्यवाद। अखबार एकॉर्डमा बोल्दै, ममीको केटाले एक पटक भने;
“कपाल सैलुन हुनु मेरो आमाको चाहना हो। म के गर्न सक्छु मेरो परिवारलाई मद्दत गर्न सक्छ र उनीहरूलाई म सक्दो उत्तम प्रदान गर्दछु। यो पनि लगानी हो "
राफेल लिओ ब्रदर्सको बारेमा:
एक अन्तर्वार्तामा, एसी मिलान स्टारले आफ्ना तीन भाइहरू छन् भने। जब उनले क्लबका लागि हस्ताक्षर गरे, यी तीनजना केटाहरू उनको साथमा उभिएका थिए - एउटा यस्तो प्रशंसक जसले प्रशंसकलाई लाग्छ कि उनीहरू उनका दाजुभाइहरू हुन्। यद्यपि यो हामी चाँडो वा पछिको भन्दा पहिले उनको तीन भाइहरूको नाम थाहा छ।
राफेल लिओ सिस्टरहरूको बारेमा:
फुटबलरको परिवार जुम्ल्याहा बच्चाहरू - पाउलो र बियन्काले आशिष्‌ पाए। तिनीहरू १० बर्षका थिए (२०१ around को आसपास)। यो उनका दिदीबहिनीहरूको अन्त्य होइन। राफेलको अर्को सानी बहिनी नाडिया पनि छ जो पालो र बियन्का भन्दा चार वर्ष कान्छी छ।
राफेल लिओका नातेदारहरूको बारेमा:
हाम्रा सम्माननीय पाठकहरू जस्तै हामी पनि उहाँकी आमा र बुवा हजुरबा हजुरआमाको बारेमा जान्न उत्सुक छौं। त्यहाँ राफेल काका, काकी, काकी, काका, भतिजा र भान्जीहरू को पहिचान मा अस्पष्टता को एक कफन छ। हामी तपाईंलाई थाहा दिनेछौं जब हामी फेला पार्दछौं।
राफेल लिओको बारेमा अनटल्ड तथ्यहरू:
यस लेखलाई अगाडिको जीवनीमा समेट्नको लागि, उहाँबारे कम ज्ञात सत्यहरू र ट्रिभिया हेर्नुहोस्।
तथ्य # १ - किन उसको छिमेकीहरु उसलाई मा पुलिस भनिन्छ:
COVID-१ of को प्रकोपको बेला, इटालियन लिग रोकेपछि राफेल लिओ पोर्तुगालमा आफ्नो परिवारमा फर्किए। आफ्नो आकार गुमाउन नदिनको लागि आफ्नो प्रशिक्षणको गतिलाई निरन्तरता दिनको लागि, उनले आफ्नो संगीत चर्को बनायो - जसले उसका छिमेकीहरूलाई चिढचिढ्यायो।
तिनीहरूले पुलिस अफिसमा शोर उपद्रवको लागि उजुरी गरे। अमोराको अवनिडा सेन्ट्रल डो पिन्हाल कोन्डे दा कुन्हाका निवासीहरूको गुनासो अनुसार उनीहरूले भने;
हरेक दिन, राफेल लियो एक साथी लिन्छन् जुन हामी एक डीजे को रूपमा जान्छौं उसको घर। सँगै, तिनीहरू ठूलो स्वरमा संगीत लगाउन सहमत छन्।
उक्त रिपोर्टको केही क्षणपछि पोर्तुगाली अधिकारीहरूले खेलाडीसँग कुरा गर्ने कोसिस गरे तर तिनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त गरेन।
तथ्य # १ - ऊ कसरी Zlatan देख्नुहुन्छ:
सेरी एमा सब भन्दा छिटो गोल अoring्गाल्दा ऊ एक चीता र सिंह हो भन्ने संकेत गर्छ। नोभेम्बर २०२० तिर, उनको इन्स्टाग्राममा लिओको पोष्टले फ्यानहरूलाई मिलनका राजा को हो - जुन उनी पनि उभिरहेका छन् भनेर उनको स्थिति बुझ्यो।
कुनै प्रश्न बिना, लिओो हुन धेरै सम्मान हुनुपर्छ वास्तविक जीवनमा इब्राहिमोभिक ज्लाटानसँग खेल्दै। स्ट्राइकरले उनलाई उसको जेठो भाईको रुपमा देख्छ।
युरोमा आय (€)।
प्रति वर्ष: € 1,400,000
प्रति महिना: € 116,667
प्रति हप्ता: € 39,473
प्रति दिन: € 5,639
प्रति घण्टा: € 235
प्रति मिनेट: € 3.9
तपाईंले राफेल लिओको अवलोकन गर्न शुरू गर्नुभयो बायो, यो उसले कमाएको हो।
तथ्य # १ - Kylian संग सम्बन्ध:
त्यहाँ एसी मिलान अगाडि पोर्तुगिज भनिन्छ एक कारण छ मिस। यदि तपाईं राम्ररी हेर्नुभयो भने, तपाईंले अवलोकन गर्नुहुनेछ कि उसको खेलको शैली, उमेर र गति जुन फ्रेन्च स्टारसँग मिल्दोजुल्दो छ। बढी, Kylian Mbappe प्रेरणाको स्रोत हो लिओलाई, जो पदक र फ्रेन्च स्टार जस्तो उपाधि जित्न चाहन्छ।
राफेल लिओको 74 83 अ of्कको सम्भावित XNUMX XNUMX अ of्कको समग्र रेटिंग छ। यो हामीलाई राम्रो लाग्दैन भने राम्रो छैन। रेकर्ड होल्डरहरू उत्तम हकदार छन्, र हामी आशा गर्दछौं कि फिफा कुनै टाढा समयमा यो ठेगाना।
जस्तो उसको नामले सts्केत गर्दछ, त्यहाँ एक उच्च संभावना छ कि स्ट्राइकर एक विश्वासी हो। लीयोले क्रिश्चियनको अभ्यास गरिरहनुपर्दछ। यो याद गर्नु उपयुक्त छ कि उनको नाम राफेल राफेल नामको भिन्नता हो।
राफेल लिभोमा यो जानकारीमूलक अंश पढ्नु भएकोमा धन्यवाद। फुटबलरको बाल्यकाल कहानी र जीवनीले हामीलाई सिकाउँछ कि बल शारीरिक क्षमताबाट आउँदैन तर एक अदम्य इच्छाबाट आउँछ। स्ट्राइकरका बाबुआमाले उनीहरूको वचन र कार्यहरूमा उनको क्यारियरमा समर्थन गरेकोमा उनीहरूको सराहना गर्न अब यो behooves।
LifeBogger मा, हामी बचपनका कथाहरू र जीवनी तथ्यहरू सत्यता र निष्पक्षताका साथ प्रदान गर्नमा गर्व गर्छौं। यदि तपाईले केहि देख्नु भयो कि ठीक लाग्दैन भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। अन्यथा, हामीलाई बताउनुहोस् कि तपाइँ टिप्पणी खण्डमा लिओको बारेमा के सोच्नुहुन्छ। स्ट्राइकरको बायोको द्रुत झलक पाउनको लागि, हाम्रो विकी तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
पूर्ण नामहरू: राफेल लिओ।
जन्म मिति: जून १ 10 1999। को १० औं दिन।
जन्मस्थान: पोर्चुगल मा Almada को शहर।
अभिभावक: श्री र श्रीमती Conceição Leão।
Siblings: तीन भाई र बहिनीहरू (पाउलो, बियान्का र नादिया)।
सेमी मा उचाई: 188 सेमी।
फ्यामी उत्पत्ति: अंगोला।
रुचि: गेमि,, पौंडी खेल्नेका साथै परिवार र साथीहरूसँग समय बिताउने।
मूर्ति: Loïc रेमी।
नेट मूल्य: करीव २ लाख यूरो (२०२१ तथ्या .्क)